टर्कीमा शिक्षा प्रणाली कस्तो छ? - ALinks
टर्की एसिया र युरोपेली महाद्वीपमा अवस्थित देश हो। देशको अधिकांश भाग एनाटोलियन प्रायद्वीपमा पश्चिमी एशियामा अवस्थित छ। टर्की मा जीवन स्तर एकदम राम्रो छ, त्यसैले यदि तपाईं आफ्नो परिवार संग त्यहाँ जाने योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाईंको निर्णय राम्रो हुनेछ।
सबैभन्दा पहिले चिन्तित हुनुपर्ने एउटा हो तपाईंको बच्चाहरूको शिक्षा। टर्की मा शिक्षा मापदण्डको रूपमा मान्यता छ धेरै राम्रो विश्वको कुनै पनि देशको तुलनामा, स्कूल र विश्वविद्यालयहरूको उच्च स्तर छ।
टर्की मा शिक्षा नि: शुल्क छ?
प्राथमिक (lköretim) शिक्षा 6/7 देखि 14/15 सम्मका सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य छ र टर्कीका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क छ। यो शिक्षा आठ वर्ष (कक्षा 1 देखि कक्षा 8) सम्म रहन्छ र चौथो कक्षामा विदेशी भाषा कक्षाहरूबाट सुरु हुन्छ।
अंग्रेजी भाषा टर्की मा सिकाइन्छ?
विद्यालयमा सिकाइने विदेशी भाषा एक विद्यालयदेखि अर्को विद्यालयमा फरक हुन्छ। अङ्ग्रेजी धेरै पटक हो, जबकि केही विद्यालयहरूले यसको सट्टा जर्मन, फ्रान्सेली, वा स्पेनिस सिकाउँछन्। कतिपय निजी विद्यालयले दुईवटा विदेशी भाषाको अध्यापनलाई जोड्छन्।
यहाँ तलको संक्षिप्त वर्णन छ टर्की मा शिक्षा प्रणाली.
टर्कीमा शिक्षा प्रणाली
टर्कीमा शिक्षा प्रणाली प्राथमिक, माध्यमिक, र तृतीयक, विश्वविद्यालय वा यस्तै संस्थानहरूमा शिक्षा समावेश गर्दछ।
प्राथमिक शिक्षा (to देखि १ years वर्ष पुरानो)
प्राथमिक शिक्षा देशको शिक्षाको सबैभन्दा आधारभूत र सबैभन्दा आधारभूत अंग हो। टर्की गणतन्त्रको संविधानले नै शिक्षा सबै नागरिकका लागि नि:शुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ भनी बताउँछ। कतिपय विद्यालयहरू निजी रूपमा सञ्चालित छन्, तर देशका अधिकांश विद्यालयहरू राज्यद्वारा नै वित्तिय र सञ्चालित छन्। टर्कीमा बालबालिकाको लागि प्राथमिक शिक्षा6वर्षको उमेर पछि सेप्टेम्बरको पहिलो महिनामा सुरु हुन्छ। सफलतापूर्वक प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेपछि विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा प्रदान गरिनेछ।
माध्यमिक शिक्षा (१ to देखि १ years वर्ष पुरानो)
टर्की मा माध्यमिक शिक्षा देश मा सबै विद्यार्थीहरु को लागी अनिवार्य छ। बच्चाहरूले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा सफलतापूर्वक आफ्नो प्राथमिक शिक्षा पूरा गरे पछि वा प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा प्राप्त गरेपछि शुरू गर्छन्। माध्यमिक शिक्षा १ 14 बर्ष उमेरको उमेरबाट सुरु हुन्छ र years बर्षसम्म जारी रहन्छ। माध्यमिक शिक्षा सामान्य, प्राविधिक, र व्यावसायिक अध्ययन कभर गर्दछ। साथै, विद्यार्थीहरूलाई टर्की भाषा उनीहरूको मातृभाषाको रूपमा सिकाउनुपर्दछ, जुन सबै विद्यार्थीहरूको लागि अनिवार्य छ। माध्यमिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूरा गरे पछि विद्यार्थीहरूलाई एक लाइज डिप्लोमासी (जुन हाईस्कूल डिप्लोमाको अर्थ हो) प्रदान गरिनेछ। यसको मतलब यो पनि छ कि विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि परीक्षामा अन्ततः विश्वविद्यालय जान सक्छन्।
तृतीयक शिक्षा वा उच्च शिक्षा देश मा अनिवार्य छैन। टर्की विश्वविद्यालयहरू पनि रिपब्लिकन संस्थाको रूपमा मानिन्छ जहाँ विद्यार्थीहरूले उनीहरूको उच्च शिक्षा लिन सक्छन्। त्यहाँ बिभिन्न प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रमहरू छन् जुन ती विश्वविद्यालयहरू द्वारा प्रस्ताव गरिन्छ, यी प्रोग्रामहरू दुई बर्ष वा चार बर्ष लाग्न सक्छ। टर्की विश्वविद्यालयका बाँकी विश्वको तुलनामा उच्च स्तरहरू छन्। केही विश्वविद्यालयहरू पनि यस क्षेत्रमा शीर्ष स्थानमा छन्।
मा हाम्रो लेख हेर्नुहोस् टर्की मा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरू यस बारेमा थप पढ्न।
शिक्षाटर्की मा स्कूल प्रणालीटर्की मा स्कूलहरूटर्कीटर्की स्कूलहरूविश्वविद्यालयहरु
फ्रान्सको सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुहोस्
इस्तानबुलमा सस्तो होटल खोज्दै हुनुहुन्छ?
इटालीका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न चाहानुहुन्छ? विश्वविद्यालयहरूका सबै विवरणहरू यहाँ जाँच गर्नुहोस्!
नोभेम्बर 21, 2021